Wasiirkii arrimaha dibadda Iiraan oo iscasilay - Halbeeg News
Wasiirkii arrimaha dibadda Iiraan oo iscasilay
DAHRAAN (HALBEEG)- Wasiirkii arrimaha dibadda dalka Iiraan Maxamed Jawaad Dariif ayaa shaaciyay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo ee uu ka hayay dowladda Iiraan sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaas.
Wasiir Jawaad wax faahfaahin ah kama uusan bixinin sababahaku kallifay in uu isku casilo, isaga oo arrintaa si kadis ah ugu baahiyay baraha bulshadu ay ku xariirto.
Qoraal gaaban oo uu soo dhigay bartiisa Instigram-ka ayuu ku yiri “Waxaan ka cudur daaranayaa in aan awoodi karin sii wadidda shaqada aan qaranka u hayo wax aan sidoo kale ka cudur daaranayaa wax walba oo gaabis ah oo yimid mudadii aan xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay, wax aan u mahad celinayaa shacabka iyo masuuliyiinta dalka Iiraan,” ayuu yiri Jawaad.
Wakaalladda wararka dowladda Iiraan ee IRNA waxay sheegtay inuu Afhayeen Cabaas Musaafi xaqiijiyey inuu is-casilay Wasiirkaasi oo xilka hayey tan iyo bishii Agoosto ee sannadkii 2013-kii.
Cali Najfi Khoshrodi Afhayeenka guddiga ammaanka ee baarlamaanka iiraan oo maanta ka hadlay is casilaadda wasiirka ayaa sheegay in iminka 160 xildhibaan ay wadaan saxiixa warqad ay u dirayaan wasiir Jawaad taasoo ay ugu codsanayaan in uu xilka sii hayo.
Mudane Dariif ayay warku sheegayeen in muddooyinkii dambe uu wajahayay culays fara badan kadib markii madaxweyne Donald trump uu joojiyay ku lug lahaanshaha heshiiskii ku saabsanaa arrimaha nukliyeerka ee ay kal hore wadagaareen, kaasoo dhigayay in Iiraan ay dhinto bacraminta nukliyeerka taas badalkeedana laga dabciyo cunaqabataynta.
Maamulka madaxweyne Trump oo saluugsan heshiiskaas ayaa ku gacan sayrey isaga oo sheegay in Iiraan aysan fulinin heshiiskii lala galay sidoo kalena ay dhaq-dhaqaaqyo ka waddo arrimaha dibadda taasoo ay ugu horreyso in ay ku dhex milantay dagaalka Suuriya.
Iiraan oo ah dal qani ku ah soo saarka saliidda ayaa waxaa ka taagan caqabado dhaqaale waxaana waayihii dambe dalka ka dhacayay dibad baxyo ay dadweynaha dalkaas uga cabanayeen sicir bararka nololeed ee waddanka ka jira.
Masuuliyiinta Butlaan: Dhagarqabayaashii Caasha dilay caddaaladda ayey wajihi doonaan
Wasiirrada arrimaha gudaha dowlad goboleedyaa iyo dowladda federaalka ah oo ku shiraya Muqdisho